Wararka - Maxay yihiin tallaabooyinka lagu yareynayo isticmaalka koronto
Maxay yihiin tallaabooyinka lagu yareynayo isticmaalka koronto
Waqtigan xaadirka ah, tallaabooyinka ugu muhiimsan ee lagu yareeyo isticmaalka koronto waa:
In kor loo qaado xuduudaha nidaamka korontada. Xuduudaha korantada ayaa ah qodobbada muhiimka ah ee saameeya isticmaalka koronto. Tusaale ahaan, foornada 60t, marka korantada dhinaca labaad ay tahay 410V kan hadda soconayana uu yahay 23kA, isticmaalka koronto-dhamaadka-hore waa la yareyn karaa.
Koronto isku-dhafan oo biyo-qaboojiye ayaa la qaataa. Koronto isku-dhafan biyo-qabow waa nooc cusub oo koronto ku shaqeeya oo dibedda laga sameeyay sanadihii la soo dhaafay. Korontada isku dhafan ee biyaha lagu qaboojiyey waxay ka kooban tahay qaybta tuubbada birta ah ee biyaha qaboojisa iyo qaybta ka shaqaysa garaafka hoose, qaybta biyaha qaboojiyaana waxay ku saabsan tahay ilaa 1/3 dhererka korantada. Maaddaama uusan jirin qiijiid heerkul sarreeya (qiiqa garaafka) qaybta tuubbada birta ee biyaha lagu qaboojiyo, qiiqa elektaroonigga ayaa yaraanaya, qaybta tuubbada birta ah ee biyaha qabowna waxay ilaalisaa xiriir wanaagsan oo lala yeesho gripper. Maaddaama dunta qaybta biyaha-qaboojiyaha iyo qaybta garaafku ay qaataan nooca biyo-qaboojiyaha, qaabkeedu waa xasilloon yahay, oo aan waxyeello gaadhin, wuxuuna u babac dhigi karaa tiirarka waaweyn, kaas oo hagaajinaya xoogga isugeynta korantada, sidaas awgeedna si weyn u yareynaya isticmaalka koronto.
Farsamaynta ka hortagga oksaydhka ee koronto garaafka buufiska koronto lagu xidho Marka la eego isticmaalka elektaroodyada ku jira geedi socodka dhalaalinta, talaabooyinka farsamo ee garaafka buufinta biyaha korantada iyo ka hortagga oksidation ayaa la qaatay, taas oo ah in la yiraahdo, qalabka wax lagu buufiyo ee biyaha lagu buufiyo ayaa ka hooseeya koronto qabashada si loogu buufiyo biyaha dusha korantada, sidaas darteed in biyaha ay hoos u soo baxaan dusha korantada, iyo biibiile giraanta ayaa loo isticmaalaa in lagu afuufo hawo cufan ilaa dusha sare ee ka hooseysa daloolka korantada ee daboolka foornada, si loo qiyaaso socodka biyaha. Isticmaalka habkan, isticmaalka koronto birta ah ayaa si cad u yaraatay. Tikniyoolajiyadda cusub ayaa markii ugu horreysay lagu dabaqay foornada korantada ku shaqeeya ee aadka u sarraysa. Habka koronto ku buufinta biyaha waa mid fudud, fudud oo la shaqeyn karo oo ammaan ah.
Teknolojiyada dusha sare ee korantada Tikniyoolajiyadda dahaadhka koronto waa hab fudud oo wax ku ool ah si loo yareeyo isticmaalka koronto.
Waxyaabaha sida caadiga ah loo isticmaalo qalabka wax lagu dhejiyo ee koronto ayaa ah aluminium iyo waxyaabo kala duwan oo dhoobada laga sameeyo, kuwaas oo leh iska caabin qiijiid oo xoog leh heerkulka sare waxayna si wax ku ool ah u yareyn kartaa isticmaalka qiiqa ku yaal dusha korantada.
Dhexgelinta korantada ayaa loo isticmaalaa. Dhex-dhexaadiyaha koronto waa inuu ku shubo korantada wakiilka kiimikada oo uu ka dhigo dusha sare ee korantada inuu la falgalo wakiilka si loo hagaajiyo iska caabinta korantada qiiqa heerkulka sare. Isticmaalka koronto ayaa hoos u dhacay 10% ~ 15% marka loo eego koronto caadi ah.